उडान रद्द भएपछि निगमका कार्यकारी अध्यक्षमाथि आयो यस्तो विपत्ति, कसरी बचाउलान् पद? -
उडान रद्द भएपछि निगमका कार्यकारी अध्यक्षमाथि आयो यस्तो विपत्ति, कसरी बचाउलान् पद?
२१ भाद्र २०७६, शनिबार ०४:१४ 270 पटक हेरिएको
काठमाडाैँ – जापानको ओसाकाका लागि साताको तीन उडान गर्ने भन्दै उडेको नेपाल एयरलाईन्सको वोईङ जहाज सातादिन नबित्दै उडानहरु धमाधम रद्द हुन थालेका छन् ।
१२ वर्षपछि पनि नेपाल वायु सेवा निगमले जापनको ओसाका लागि साताको तीन उडानबिना कुनै आवश्यक तयारी उडान गर्न खोज्दा यस्तो अवस्था आएको निगमकै तल्ला तहको कर्मचारी बताउछन्।
उनीहरुले व्यवस्थापकिय कमजोरी, बजारिकरण, टिकट बिक्री र एजेण्टले प्रभावकारी काम नगर्दा दोब्बर सस्तो टिकट बनाउदा पनि यात्रु नपाएपछि का उडान रद्द गरिएको हो।
यसले निगममा भएको वेथिती र भ्रष्टाचारलाई फेरी सतहमा ल्याएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। निगमका प्रवक्ता गणेबहादुर चन्दले एक महिनाका लागि साताका तीन उडानमध्ये एक उडान कटौटी गरिएको र एक महिनापछि पूर्णरुपमा सञ्चालन गरिने बताएका छन् । तर, प्रवक्ता चन्दले भनेजस्तो अवस्था देखिदैन ।
आवश्यक ठोस योजनाबिना निगमको व्यवस्थापनले पाँच महिनाको तयारी भन्दै ओसाका उडान गर्दा करोडौंको घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । काठमाडौं–ओसाका–काठमाडौं उडानको एक करोड २० लाख रुपैयाँ अनुमानित खर्च हुन्छ ।
अहिलेको टिकट शुल्कलाई हिसाब गर्ने हो भने त्यसलाई घटाउदा निगमले अहिले प्रति फ्लाईट ८० लाख घाटा व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । दोब्बर सस्तो टिकट बनाउदा पनि ओसाका उडानका चार उडान रद्द भइसकेका छन् । जुन अत्यन्तै लज्जास्पद कुरा हो । जापानको ओसाको पहिलो उडानमा पर्यटन राज्यमन्त्री, सांसद र पर्यटनव्यवसायीका नाममा २० जना यात्रुले सित्तैमा जापान सयर गरेर फर्केका छन् ।
जहाजलाई भूमिस्थ घोषणा गरी सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा बढी मूल्य बोलकबोल गराई प्रतिघण्टा ३०० डलरको दरले कमिशन खाइरहेका छन् । लिजबाट मोटो रकम कमिशन आइरहेको कारणले बिग्रिएका दुई वटा एपियु सात महिनासम्म पनि मर्मतसम्भारमा नपठाई ह्याङगरमा थन्क्याएर राखिएको छ ।
गएको अघिल्लो मंगलबार जम्मा १७ जना यात्रु बोकेर निगमको जहाज ओसाका पुगेको थियो । त्यसपछि निगमको व्यवस्थापन पक्षको अकर्मण्यता र असक्षमता प्रदर्शन भएको थियो । महाप्रबन्धक हुँदा काम गर्न नसकेर भागेका मदन खनाल कार्यकारी अध्यक्ष बनेर आएपछि निगम झन अस्तव्यस्त र भ्रष्टाचारको अखडा बन्न पुगेको छ । पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कमाण्ड नभएका र निर्णय क्षमता कमजोर भएका कार्यकारी अध्यक्ष खनाललाई अल्टिमेटम दिइसकेका छन् ।
एकजना व्यापारीको दवावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गृह जिल्लावासीका नाममा प्रभावमा पारेर कार्यकारी अध्यक्ष बन्न सफल भएका खरेलका पछिल्ला गतिविधि र कामबाट प्रधानमन्त्री ओली समेत असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले निगम सुधारका निम्ति गठन गरेको पूर्व सचिव शुसिल घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउना साथ कार्यकारी अध्यक्ष खनाललाई हटाउने टुङ्गोमा पुगेको मन्त्रालय परिसरमा चर्चा छ । कार्यदलमा धेरैजसोले कार्यकारी अध्यक्ष खनाललाई हटाउन पर्ने सुझाव दिएको पनि बताइन्छ । यससँगै पर्यटनमन्त्री भट्टराईले नयाँ कार्यकारी अध्यक्षको खोजी सुरु गरेका छन् ।